Fodiamandrin'I Fafah : Vonton’alahelo ireo mpakafy - L'Hebdo de Madagascar
Nodimandry, ny alahady 20 oktobra 2019, teo amin’ny faha-65 taonany, rehefa notsaboina tetsy amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Ampefiloha, Rajaonarison Famantanantsoa antsoina hoe Fafah, ao amin’ny tarika Mahaleo. Fijanonan’ny fo tampoka no nahalavo ity andrarezin’ny kanto malagasy ity raha ny fanambarana nampitain’i Bekoto, mpitondra tenin’ny tarika Mahaleo. Ny fahatakarany feo ambony no nampiavaka azy tao anatin’ny tarika sy ny vazivazy rehefa eny ambony sehatra.
Teraka tamin’ny 13 mey 1954, Rajaonarison Famantanantsoa na Fafah. Manambady ary niteraka efatra mianadahy izy. Vitsy ny olona mahafantatra fa mahay mitendry gitara ary mpikatroka haiady « Aikido » sy lomano ny lehilahy. Anisan’ny mpikambana namorona ny tarika Mahaleo tamin’ny taona 1975 tany Antsirabe i Fafah. Tsy ny tarika Mahaleo ihany fa nahafantarana an’ity talenta miavaka ity ihany koa ny fiarahana tamin’ny tarika Feo Gasy sy ny Vavaka Hira Fiderana (VHF). Tsy vitsy koa anefa ireo mpanakanto nampiara-peo taminy teo amin’ny tontolon’ny mozika.
Nanara-dia ireo namany tao anatin’ny tarika Mahaleo toa an’i Raoul (3 septambra 2010) sy Nôno (29 aogositra 2014) ihany koa i Fafah. Dama, Charles, Dadah ary Bekoto sisa no hamelona tsy ho faty ny tarika Mahaleo.
Tafiditra tao anatin’ny fandaharam-potoanan’ny fianakaviana sy ny tarika Mahaleo ny fisian’ny fiaretan-tory tetsy amin’ny kianjan’Andohalo, ny talata hifoha alarobia 23 oktobra 2019.
Nalevina teny amin’ny fasan-drazany teny Rangaina Ilafy ny nofo mangatsiakan’i Fafah rehefa nampandalovina teny amin’ny lapan’ny Kolon-tsaina Mahamasina, ny tapany marainan’ny alarobia 23 oktobra ary natao veloma farany tao amin’ny fiangonana Fjkm Tranovato Faravohitra.